Somali News 10.13.21
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay ku dartay 94 dhimasho oo dheeri ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, oo ay ku jirto mid kale oo ka dhacay Degmada Woodbury.
Dhimashadu waxay dhacday intii u dhaxaysay dabayaaqadii Agoosto iyo horraantii Oktoobar wadar ahaan 6,748 tan iyo bilowgii masiibada.
Tirada tijaabooyinka togan toddobadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa sii socota inay hoos u dhacaan, oo hoos uga dhacday 8% tan iyo Isniintii.
Heerka waxtarka imtixaanka Iowa wuxuu hoos ugu dhacay 9.2%. Si kastaba ha ahaatee, heerka wax -ku -oolnimada ee Degmada Woodbury waa 17% iyada oo inta badan kiisaska dadka da'da yar sida laga soo xigtay Caafimaadka Degmada Siouxland.
Heerka hadda ee dadka si buuxda loo tallaalay ee Degmada Woodbury waa 45.8%. Taasi waxay 9% ka yar tahay heerka gobolka oo dhan.
Warbixin toddobaadle ah ayaa muujineysa 40 bukaan oo qaba COVID-19 lagu daweynayo labada isbitaal ee waaweyn ee Sioux City. Iyo, koror toddoba ah toddobaadkii hore.
Warbixin cusub oo ay soo saartay Robert Wood Johnson Foundation ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah lixdii ilmood ee Iowa ee da’doodu u dhaxayso 10 ilaa 17 jir ay yihiin kuwo cayilan.
Warbixintu waxay Iowa ka gashay kaalinta 18aad ee qaranka buurnaanta carruurta. Heerkeedu wuxuu ku dhawaad ​​boqolkiiba 17 xoogaa ka sarreeyaa celceliska qaranka.
Sarkaal aasaaska u ah masiibada COVID-19 ayaa kaliya uga sii dartay dhibaatada buurnida carruurnimada, taas oo si aan caadi ahayn u saameysa qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo carruurta midabka leh.
Warbixintu waxay soo jeedinaysaa isbeddellada siyaasadda sida samaynta cuntooyinka iskuullada caalamiga ah oo joogto ah iyo ballaarinta barnaamijyada federaalka sida WIC iyo kuwa kale oo ujeedkoodu yahay in qoysaska laga saaro saboolnimada.
Degmooyinka iskuulada Iowa waxay sii haysan karaan waji -xidhka ka dib markii garsoore federaal ah uu oggolaansho hordhac ah ka siiyay dacwad waalidiinta…